एउटा सानो गल्तीले चुर्लुम्मै डुबे माधव नेपाल, के गरे त्यस्तो !
काठमाडौँ – नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन् माधवकुमार नेपाल । समयमै विचार नपुर्याउँदा उनी चुर्लुम्मै डुबेका छन् ।
कुरा गत मंगलबारको हो । इटहरी उपमहानगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको आँखा अस्पतालको सिलान्यास गर्न पुगे माधव नेपाल ।
उनलाई यो कुराको जानकारी थिएन की सिलान्य गरेको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा थियो । उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ लविपुरमा बन्न लागेको उक्त अस्पतालको सिलान्यासका क्रममा अध्यक्ष नेपालले अस्पताल जस्तो विषय संवेदनशील भएकाले समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।
२५ करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त स्थानको जग्गा अस्पतालको नाममा आएको रहेनछ । समयमा बन्नेको कुरा छोडौँ सुरु हुन पनि दुई बर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
१० कट्ठा क्षेत्रफलमा बन्ने अस्पताल २ वर्षमा बनाइ्सक्के योजना छ । तर, अचम्मको कुरा, जुन जग्गामा अस्पताल बन्दै छ त्यसका जग्गाधनीलाई भने यसबारे जानकारी दिइएको छैन ।
जग्गा खोजीको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारले जग्गा धनीलाई नसोधि पूर्वप्रधानमन्त्री ल्याएर अस्पताल शिलान्यास गरेको खुलेको छ । शिलान्यास पैनीको डिलमा गरिएको छ ।
पश्चिमतिर तत्कालीन हाँसपोसा गाविस ८(ख) हाल इटहरी १७ लविपुर (कित्ता नम्बर १७ र १५१) ठाकुर प्रसाद आचार्यको नाममा रहेको छ । त्यस्तै कित्ता नम्बर ११८ रेखा देवी अग्रवालको नाममा छ ।
यो जग्गा फणीन्द्र बहादुर ढकालले भोगचलान गर्दै आएका छन् । उनले जग्गा अरूकै नाम भए पनि सहमतिमा आफूले भोगचलन गर्दै आएको बताए ।
भोगचलन गरिरहेको जग्गामा त्यति ठूलो योजनाको काम अघि बढाउँदा आफूहरुलाई थाहा नहुनु अचम्मको विषय भएको उनले बताए । उनले इटहरी उपमहानगर प्रमुखले आफूले भोगचलन गरि आएको जग्गा द्वन्द्वकालमा माओवादीले कब्जा गरे जस्तो गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘म त छक्क परेँ, हेर्न पनि गएँ। जग्गाकै छेउमा शिलान्यास गरेको देख्दा अचम्म लाग्यो’ उनले भने ‘ठूलाले जे गर्दा पनि हुन्छ ? मेयर सा’बको जग्गामा मलाई शिलान्यास गर्न जाऊ भन्न खोज्नु भएको हो की ?’ उनले अहिले शिलान्यास गरेर केही नहुने भन्दै भोलिका दिनमा काम अघि बढाए एक्सनमा उत्रिने बताए ।
उक्त जग्गा ७ वर्ष अघि व्यापारिक समूहले खरिद गरेको थियो । जग्गामा ५ जनाको स्वामित्व रहेको छ । व्यापारी समूहले किनेको जो जग्गामा पार्टनरबीचमा विवाद रहेकोले अस्पताललाई दिने निर्णय नभएको जग्गा धनीमध्येका एक अशोक बगेडियाले बताए । उनले शिलान्यास भएको जग्गा आफूहरूको भएको बताउँदै दानसमेत नदिने बताए ।
उनले भने ‘हामीले जग्गा दिएका छैनौँ, व्यक्तिको जग्गामा सरकारले कब्जा गरेर अस्पताल बनाउँछ भने हामी न्याय माग्न जान्छौँ ।’ त्यस्तै अर्का पार्टनर जेपी अग्रवालले समूहमा रहेको जग्गा दिनेबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए ।
उनले इटहरी उपमहानगरले आँखा अस्पताल बनाउने भनेर शिलान्यास गरेको जग्गा आफूहरूको भएको र सो जग्गा बेच्दा पनि नबेच्ने बताए । आफूहरूले दान पनि नदिने र बेच्न पनि तयार नभएको उनको भनाइ छ ।
यता इटहरी उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी जग्गा धनीसँग कुराकानी गरेर शिलान्यास गरेको दाबी गर्छन् । दुई वर्षअघि सल्लाह गरेको भए पनि काम गर्न ढिला भएको उनको तर्क छ । त्यहाँ जग्गाधनीले नदिए एक दुईरसय मिटर आसपास जग्गा किनेर भवन बनाउने चौधरीले बताए ।
उनले अस्पताल जस्तो संवेदनशील विषयमा आफू लागि परेको बताउँदै दुई करोड खर्च गरेर भए पनि आएको योजना बनाएर छोड्ने बताए ।
प्रमुख चौधरीले भने ‘दश कट्ठाको कति होर दुई करोड न हो । त्यस ठाउँमा दश कट्ठा हैन खोजी गरे एक बिघासम्म तयार गर्न सक्छु ।